Grant hụrụ bulie ihe karịrị £ 1,000 maka BLG Mind | Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Grant Saw bulitere ihe karịrị £ 1,000 maka BLG Mind
Edere na April 1, 2021 site na BLG Uche Udi: Ego
Otu ndị ọka iwu sitere na ụlọ ọrụ Grant Saw gbara ọsọ, na-eje ije ma ọ bụ na-agba ịnyịnya ígwè 200km ọ bụla na Machị iji bulie ihe karịrị £ 1,000 maka BLG Mind.
N'ime ọnwa ahụ niile, ndị ọrụ 12 sitere na South East London ndị ọka iwu gbalitere ịma aka ahụ, nke gụnyere ịgba ọsọ ma ọ bụ ịgba ịnyịnya ígwè opekata mpe nke 200km ọ bụla, ma ọ bụ ịga ije 10,000 kwa ụbọchị. Ndị otu ahụ welitere karịa £ 1,000 maka ọrụ anyị dị mkpa na usoro ahụ.
Ndị ọrụ Grant Saw Imelda Galvin na Ray Crudgington abụọ gbara ọsọ karịrị 200km. Daniel Cooper, Lauren Smith na Lisa Warner rụchara ihe ịma aka ahụ na ngwakọta nke ije na ịgba ọsọ. Charlotte Mandy nwere ihe ịga nke ọma site na igwe kwụ otu ebe, ebe Jayne Lye, Maria Lati, Michael Tobin, Randeep Thethy, Saad Hameed na Simran Lalli na-ejegharị ma ọ dịkarịa ala nzọụkwụ 10,000 kwa ụbọchị.
Ray Crudgington, Onye Nlekọta Ndị Ọrụ na Grant Saw, kwuru, sị: “Ihe ịma aka 200km ahụ bụ nnwale na ike gwụrụ mana o kwesịrị ya. Ọ ga-amasị m ikele ndị otu na ịmecha ihe ịma aka a, ma bulie ihe karịrị £ 1,000 dị mma. BLG Mind na-arụ ọrụ dị mkpa n'ime obodo na mbọ ha dị mkpa ugbu a. Anyị ga-achọ ịsị nnukwu ekele gị onye ọ bụla nyeere anyị aka wee nye onyinye. ”
BLG Mind Fundraising Manager Lucy Morrell kwuru, sị: “Ekele dịrị ndị otu ahụ iji mezue nsogbu a siri ike. Anyị chere na 100km nke Septemba gara aga siri ike, yabụ ịbawanye ebe dị na 200km wee mezue nke a bụ ihe kwesịrị ịja mma. Zụlite ihe karịrị £ 1,000 bụ n'ezie kediegwu! Anyị nwere ekele dị ukwuu maka nkwado na-aga n'ihu nke Grant Saw na-atụ anya maka ihe ịma aka ọzọ. ”
Grant Saw, onye họọrọ BLG Mind dị ka onyinye afọ nke afọ ha na Mee 2020, buliela have 2,358 ugbu a maka £ 2,500. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịkwado ha, biko gaa leta ha JustGiving page.
Mee Grant Gị n’efu
Grant Saw esoro BLG Mind rụkọọ ọrụ iji nye ndị na-akwado anyị ọrụ ịke ederede, nke dị mfe. Chọpụta otú ị ga-esi eme ya mee Uche gi n'efu.
Companylọ ọrụ gị nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na ndụ ndị mmadụ nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi na mgbaka. Chọpụta ihe banyere ụlọ ọrụ mmekọrịta na BLG Mind.